FRUITS – Healthy Life Journal
ငှက်ပျောသီးမှည့်နဲ့ ငှက်ပျောသီးအစိမ်း ဘာကိုရွေးမလဲ…
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ငှက်ပျောသီးမှာ ပိုတက်ဆီယမ်ပါဝင်မှု မြင့်မားပါတယ်။ ဒါ့အပြင် ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်ဘီနဲ့ ဗီတာမင်စီ အပါအ၀င် ဗီတာမင်အမျိုးမျိုး၊ ဖော့စ်ဖရပ်စ်၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်မှုများပါတယ်။ ငှက်ပျောသီးဟာ ကယ်လိုရီ ၉၀ ပဲပါတဲ့ သရေစာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။...
စပျစ်သီးစားလျှင် စပျစ်သီးစေ့ကိုပါ စားသင့်သော အကြောင်းရင်းများ
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) လူအများစုက စပျစ်သီးစားရင် စပျစ်သီးအစေ့ကို ထွေးထုတ်ပစ်တတ်ကြပါတယ်။ ဒီလိုမလုပ်ဘဲ စပျစ်သီးစားတိုင်း စပျစ်စေ့ကိုပါ ကြေညက်အောင် ၀ါးစားပေးရင် အောက်ပါကောင်းကျိုးတွေကို ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။ – စိတ်ကျဝေဒနာကို တွန်းလှန်ပေးနိုင်ပါတယ် စပျစ်သီးအစေ့မှာ ပရိုအန်သိုဆိုင်ယာနင်ဓာတ် ပါဝင်တာကြောင့် ဦးနှောက်ထဲက...
ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်ရန် စားသင့်သော ထိပ်တန်းသစ်သီးများ
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကို သဘာဝတိုင်း လျော့ကျစေမယ့် သစ်သီးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ (၁) သံပယိုသီးနှင့် ခရင်မ်ဘယ်ရီသီး သံပယိုသီးနဲ့ ခရင်မ်ဘယ်ရီသီးတွေက ကင်ဆာကို တွန်းလှန်နိုင်တဲ့ ထိပ်တန်းသစ်သီးတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီပါဝင်မှုများပြီး အန်သိုဆိုင် ယာနင်ပမာဏ များများ၊...
အိမ်ထောင်သည်များ အစားသင့်ဆုံး သစ်သီးငါးမျိုး
၊ စူး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အိမ်ထောင်ရေးမှာ သာယာကြည်နူးဖွယ်ရာ အဆင်ပြေတဲ့ ဘ၀မျိုးရရှိအောင် အောက်ပါသစ်သီးငါးမျိုးကို စားပေးသင့်ပါတယ်။ (၁) သလဲသီး အိမ်ထောင်သည်တွေ အစားသင့်ဆုံး သစ်သီးတွေထဲမှာ သလဲသီးကလည်း ပါဝင်နေပါတယ်။ လေ့လာမှုတစ်ခုအရ သလဲသီးဟာ သွေးတိုးကိုကျစေပြီး နှလုံးရောဂါအန္တရာယ်ကိုလည်း လျော့ကျစေတယ်လို့...
ဒူးရင်းသီးနှင့် တွဲဖက်စားသင့်၊ မစားသင့်သည့် အစာများ
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) မေး. ဒူးရင်းသီးစားတဲ့အခါ ဘယ်လိုအစာတွေကို တွဲဖက်စားပေးသင့်ပါသလဲ၊ ဒူးရင်းသီးစားတဲ့အခါ ဘယ်လိုအစားအသောက်မျိုးကို ရှောင်သင့်ပါသလဲ။ ဖြေ. ဒူးရင်းသီးစားမယ်ဆိုရင် ဒီအတိုင်း စားမယ့်အစား မင်းကွတ်သီးနဲ့ တွဲဖက်စားပေးသင့်ပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် ဒူးရင်းသီးကို ကြက်မောက်သီးနဲ့ တွဲဖက်စားပေးလို့ရပါတယ်။ ဒူးရင်းသီးစားမယ်ဆိုရင် အထူးသဖြင့်...
နာနတ်သီး၏ ကျန်းမာရေးအကျိုးကျေးဇူး ၇ ရပ်
၊ မီမိုး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) နာနတ်သီးဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရေပန်းအစားဆုံးသစ်သီးထဲမှာ တစ်မျိုးအပါအ၀င်ဖြစ်ပါတယ်။ ချိုတယ်၊ အရည်ရွှမ်းတယ်၊ အရသာရှိတယ်စတဲ့ အာနိသင်တွေရှိတဲ့အပြင် ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်ပြီး အာဟာရဓာတ်လည်း ပြည့်ဝပါတယ်။ (၁) ဗီတာမင်နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေ အပြည့်ပါဝင်ပါတယ် နာနတ်သီးမှာ ဗီတာမင်အေ၊ ဗီတာမင်စီ၊...
အမှည့်လွန်သစ်သီးစားမိရင် ဘာဖြစ်တတ်သလဲ . . .
မေး။ ။ အခုရာသီမှာ သစ်သီးတွေက ပေါပေမယ့် တစ်ခါတလေ အမှည့်လွန်သွားတတ်ပါတယ်။ အမှည့်လွန် သစ်သီးတွေကို စားမိတဲ့အခါ အာဟာရဓာတ် ရရှိနိုင်ပါသလား။ ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲ။ မမေသန်းခင်၊ မိတ္ထီလာ။ ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့်(အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ဖြေကြားသည်။ ဖြေ။ ။ အမှည့်လွန်အသီးတွေကို လုံးဝမစားဖို့...
ပိန္နဲသီးနဲ့ ပိန္နဲစေ့ စားသင့်သလား . . .
ဒေါက်တာဒေါ်ဝင်းဝင်းမြင့် (အာဟာရဆိုင်ရာအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး) ပိန္နဲသီးက ကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့ အစားအစာထဲမှာ ပါဝင်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီပါဝင်မှု ပိန္နဲသီးမှာ ကယ်လိုရီပါဝင်မှုများပါတယ်။ ပိန္နဲသီးတစ်မြွှာမှာ ၁၅၅ ကယ်လိုရီလောက် ပါဝင်ပါတယ်၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်က ၁၄၄ ဂရမ်ပါဝင်ပါတယ်။ ကောင်းတဲ့အဆီလည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကယ်လိုရီများတဲ့အတွက် သာမန်လူတွေကတော့စားလို့ရပါတယ်။ ပိန္နဲသီးအရသာက...
ပိုလှပြီး ဆွဲဆောင်မှုပိုရှိစေချင်ရင် သစ်သီးဝလံတို့ကို တစ်နေ့ ငါးကြိမ်စားပါ
ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ သစ်သီးဝလံတို့ကိုများများစားတာက သင့်ကျန်းမာရေးကို ကောင်း မွန်စေရုံသာမက သင့်အချစ်ရေးကိုပါ ကောင်းမွန်စေတယ်ဆိုတာ သင်သိပါရဲ့လား။ လေ့လာမှုအရ သစ်သီးဝလံတွေကို များများစားရင် အသားအရေကို ပိုချောမွေ့ပြီး တောက်ပစေတဲ့အတွက် ဘ၀အဖော်ကို ပိုမို ဆွဲဆောင်မှု ရှိစေနိုင်တယ်လို့ သိရပါတယ်။ (Healthy Life ဂျာနယ်မှ...
ဇူလိုငျ လ၊ 2019 ခုနှဈ